Afganistana: Mpitsoaponenana Naverina, Mpitandro Filaminana Vizana Sy Ankizy Mipararetry ny Hatsiaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 11:33 GMT
Ireto misy andian-dahatsoratra momba ny olana nianjady tamin'ireo mpitandro filaminana Afgana. Mitantara ny iray amin'ireo olana marobe natrehina tamin'ny famoronana hatramin'ny voalohany ny mpitandro filaminana i Bipasha Ray:
[Misy ireo ] mpitandro filaminana efa hikomy, miandraikitra velaran-tany midadasika, miasa mafy, mikarama varimasaka sady tsy ampy fitaovana iasana.
Tantarainy ihany koa ny momba ny fiverenan'ireo mpitsoaponenana avy any Iràna sy Pakistàna :
Tsapa ho nitombo hery ireo tanora lahy sy vavy rehefa tafaverina any amin'ny watan -ny (tanindrazany) na dia zavatra kely fotsiny aza no fantany momba an'i Afganistana. Fa misokatra ny varavarana handaozan-dry zareo an'i Afganistana rehefa tojo olana goavana ara-materialy sy fijaliana ara-tsaina ry zareo – izany hoe tsy manana firaiketam-po be amin'i Afganistana ry zareo.
Ireo faritany miavaka sasany no ifantohan'i Péter Marton ary izao manaraka izao ny zavatra hitany :
Amiko, toy ny hoe hamafisin'ny haino aman-jery ny fomba fijery hoe hadalàna ny manome fitaovana ho anà andrim-panjakana toy ny ANP, satria tsy ara-dalàna mihitsy ny fiasany. Fa tsy mifanaraka amin'ny kolontsain-dry zareo izany, hoy ny sasany, indraindray tena mazava tsara, indraindray misy hevitra ambadika. Fa angamba fitsinjovana ny fanatanterahana ny zava-misy izany.
Mazava ho azy, fa ankoatry ny olan'ny mpitandro filaminana ny olan'ny fitsaràna. Tantarain'i Mohammed Fahim ny tantaran'ny Komandà Kaftar :
Nomen'ny mpitandro filaminana any amin'ny faritanin'ny Baghlan ny baiko hisamborana ny Komandà Kaftar noho ny famonoana ny lehibe mpanome baiko tao an-toerana. Kaftar no hany vehivavy Afgana niady tamin'ny Talibàna, ny Rosiana ary ireo fahavalo marobe tao an-toerana, tany an-tendrombohitra tany amin'ny distrikan'i Narin, izay iparitahan'ireo fatinà fiara mifono vy an-dry zareo Sovietika taloha sy ny Talibàna.
Vehivavy 50 taona ny Komandà Kaftar amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo mpikambana matanjaka tao amin'ny Jamiyat-i-Islami izy, fikambanana fantatra amin'ny hoe Fifanarahan'ny Tavaratra amin'izao fotoana izao. Lehilahy 150 no ao ambany fifehezany.
Nambaran'ny mpitandro filaminana tany Baghlan fa namono mpitari-tafika Jihad i Kaftar, ankoatr'izay, karohana noho ny fangalarana ireo lehilahy miaraka aminy.
Fa tsy izay fotsiny ny herin'ny lohan'ilay mpitarika an'ady. Taterin'i Sanjar ny tranga mampihorohoro nanjo an'i Parvez Kambaskhsh:
Parviz, 23 taona, mpanao gazety voasambotra telo volana lasa izay (Oktobra 2008). Fitrohana lahatsoratra nosoratanà iraniàna iray manampahaizana izay lazaina fa niaty fihetseham-po manohitra silamo no niampangàna azy. Voaheloky ny fitsarana ambaratonga voalohany any Balkh ho faty amin'ny alàlan'ny fanantonana ilay voampanga. Na ny voampanga, na ny mpisolovava notendrena hampiasa ny zony hiaro tena dia samy tsy natao nahita rirany…
Niharan'ny lalao politika i Parviz. Manana ny feony eo anivon'ny fiarahamonina Agfàna ny haino aman-jery, mamahana soatoavina ho an'ny rafitry ny fahefana ny haino aman-jery. Mikasika izay feo henoina sy feo ahilika ity lalao ity. Be resaka be momba ny talibana ireo haino aman-jery, be lavitra noho ny an'ny mullahs (mpitondra fivavahana) ary ny governemanta Karzai izay tsy te-hanaisotra ny fahefana amin'ny faribolana klasika ho eny an-tànan'ny olontsotra. Fitaovana tsara hanasaziana ireo vondrona tsy iriana izay heverina fa tsy misy fotony sy mampidi-doza ny Mullah sy ny finoana.
Nihaona taminà tovolahy, Farshid, tao amina trano fivarotana trondro tany Kabul i Safrang. Mahakivy tahaka ny zavatra asehony ny tantara resahany.
Mitantara amiko io zazalahy io : “Nasaina nody niaraka tamin'ny Afghanis zato i Farshid ny hariva – roa dolara. Ohatrinona no asan'i Farshid hatramin'izao ? “30 Afghanis.” Amin'ny 6 ora hariva izao – efa maizina sahady. Ary niteny ve aho hoe nangatsiaka ? ‎
Ekena. Ary ahoana ny amin'ny fiarovana? Tantara iray hafa momba ny fiovàna atolotry ny Filànkevitra Eoropeana misahana ny Fifandraisana Amin'ny any Ivelany no resahan'i Bipasha Ray :
Mandrisika ny governemanta Eoropeana handefa andian-tafika bebe kokoa any Afganistana ilay tatitra, mba hanafoanana na hampihenàna ny tahirim-panjakana amin'ny andian-tafiny, ary hamadika ny ” tsy fahombiazana” ho fampitomboana ny fanampiana ho amin'ny fanorenana indray. Etsy ankilany, ilay tatitra dia manery an'i Etazonia hanova ny paikadiny ho ara-politika kokoa sy hiala amin'ny famendrahany avy eny an'habakabaka fanafody amin'ny ady ataony amin'ny zava-mahadomelina na ny fividianana vokatra ôpiôma. Manoro hevitra an'i Etazonia mba hamindra ny vesatry ny olana ho amin'ireo mpijirika ary hifantoka amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo tompon'ny zava-mahadomelina sy ireo governemanta mpanohana azy.